I-Casa Margherita enokubukwa kwechibi - ilungele umndeni - I-Airbnb
I-Casa Margherita enokubukwa kwechibi - ilungele umndeni
Oggebbio, Piemonte, i-Italy
Indlu ye-rustic ezimele enekhishi nokubukwa ngaphezu kweLake Maggiore, edolobhaneni elidala elihle, elizungezwe imvelo, elinohambo oluningi. Indawo yokupaka yomphakathi kanye nokufinyelela ogwini lwamahhala (imizuzu eyi-10 ngezinyawo).
Impahla yonke kumazinga amathathu.
Isitezi esiphansi: Igumbi elibanzi elinekhishi, indawo yomlilo, umbhede wesofa wezingane kanye nethala elincane.
Isitezi sokuqala: igumbi lokulala, igumbi lokugezela kanye nethala elincane elinokubukwa kwechibi.
Isitezi esiphezulu: I-mansard encane efinyeleleka ngeladi yokhuni elungele ukufundwa nokuphumula ngokubuka kwechibi.
Indlu ingaphakathi kwedolobhana elidala elihle elizungezwe imvelo. Kuyimizuzu embalwa uhamba ngezinyawo ukusuka echibini nasenkabeni yedolobha lase-Oggebbio (isitolo esikhulu, indawo yokucima ukoma, ihhovisi leposi), kanye namakhilomitha ambalwa ngemoto usuka emadolobheni amakhulu asogwini lwechibi (Cannero Riviera, Cannobio). Kunemisebenzi eminingi emvelweni, kusukela ekuhambeni okulula ukuya ekuhambeni okuyinselele e-Val Grande National Park, ukuhamba ngezikebhe, ukuntweza komoya kanye nokuhamba ngomkhumbi echibini. Ithenisi, igalofu, ibhola likanobhutshuzwayo, i-paddle ingenziwa eCannero, eCannobbio naseVerbania. Izindawo zokudlela zasemkhathini kanye nezindawo zokubuka ezothando zisakazeke kulo lonke igquma futhi, kunjalo, ogwini lwechibi. Kukhona nepaki le-adventure lezingane ngaphakathi kohambo lwemizuzu engama-30 kanye nomugqa we-zip omangalisayo!
Samukela izivakashi ekhaya futhi siyatholakala nganoma yiluphi ulwazi ngesikhathi sokuhlala kwazo. Sihlala imizuzu embalwa ukusuka endlini. Ungangabazi ukusithinta ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nendlu noma ukuxhumana nezidingo zakho ezikhethekile esizozihlola ngezikhathi ezithile, ngiyabonga
Samukela izivakashi ekhaya futhi siyatholakala nganoma yiluphi ulwazi ngesikhathi sokuhlala kwazo. Sihlala imizuzu embalwa ukusuka endlini. Ungangabazi ukusithinta ukuze uthole ulw…
Inombolo yepholisi: 10304900046
Hlola ezinye izinketho ezise- Oggebbio namaphethelo